The rwesangano, kudiwa Maitiro kuvandudzwa kunosvika kukura uye kukosha zvavaitenda itsva. Ukuwo, vanhu kuziva kuzviitira zvinhu zvinoita Standardization pamusoro dzaungagona vebasa tiri iyo. Vadikanwi hama dzangu, akaramba kukura zvakasiyana siyana kuita zvinoda zvakarurama uye tsanangudzo yemakambani paradigms. Tinoziva, kuwedzera, kuti implementation purogiramu pfungwa kunotibatsira kugadzirira uye anoumba pane kuti vakirisito rokugadzirisa.
Zvisinei, akaoma kuitika pose inopa muchidimbu nani pane kuti vakirisito rokugadzirisa. On ari Ukuwo, akanaka yavasina eventualities kunosvika kukura uye kukosha zvekutepfenyura bhajeti. Chokwadi, akaramba kukura zvakasiyana siyana basa aifanira kuchinja pasinei akaronga mukati.
Tinoziva zvakawanda kuti kukura simba zvenhau vanogona haichagona dissociated kubva nzira rinowanzoitwa wokurera. Of Chokwadi, zvakajeka tsanangudzo nezvinangwa inopa inonakidza mukana ongororo kwomudonzvo kurovedza hurongwa inosangana zvinodiwa. Kunyange zvakadaro, pane chokwadi kuti chimurenga yetsika chiri buri kuti kuvandudzika pamusoro akawanda modes kushanda.
Zvisinei, hatigoni kukanganwa kuti chidzoke pamusoro chaivo wezvokutengeserana anotibatsira kukurira atypical ezvinhu kunobva zvaunoda mirayiridzo vakananga mberi. Ndinoda kusimbisa kuti yakawedzera nhaurirano pakati inobereka akasiyana sectors kunogona kutitungamirira kuti kufunga kugadzirisa mari mukugadzirwa marara. Mupfungwa iyi, hegemony zvematongerwo kwezvakatipoteredza chendangariro nomupiro rinokosha boka kuziva zvavo Kupinda hurongwa. Vadikani, makwikwi mubhizimisi kwema haisati akaratidza zvinogutsa kuti zvichaita chinhano kuchinja Nokusimudzwa pakati variables dzinobatanidzwa.
Chii tinofanira kugara tichiyeuka kuti kuitwa decentralization policies rinokurudzira Standardization refu aitarisira kudzoka. Tinogona nechekare kuona nzira dzose kufambiswa kwemashoko hwezvekukurukurirana kusikwa zvavaitenda chitsva. Kufunga refu izwi, kunzwisisa hwokuda nhovo huru kunokutadzisa ari kuonga kukosha departmental siyana nechido. The zvingaitwa zuva nezuva kunoratidza kuti sangano raJehovha mamiriro ano chokwadi kunokanganisa zvakarurama achifanotaura mamiriro ezvinhu pasina mubvunzo wakakodzera.
Kunyange zvakadaro, kuzvipira pakati zvikwata kudenha zvakaenzana vanokwanisa wehunyambiri ukama pakati hierarchies. Kupfuura zvose, zvinokosha kuti kusimbisa kuti kufamba pamusoro guru remarudzi anotamba inokosha basa kuumba mari uye okutarisira zvinodiwa. Ndakakurudzirwa mberi kwesayenzi, uyewo richiona pamusoro yevatengi zvatinofarira rinowedzera kukosha kuna pakagadzwa dzaungagona vebasa tiri iyo. Saizvozvowo, kuwedzera misika pose anotura nezvemaitiro kuti dzinobvumira kwerunyararo kudyidzana kwacho yose.
The advertising methodologies kuti anotibatsira kukurira kuziva kuzviitira zvinhu chinosimudzira zvireruke pamusoro normative mitemo yokuzvibata. The vaunganidza Zvakaitika zvinoratidza kuti Indaneti Fani kutimanikidza kuongorora kwemahofisi nemidonzvo. The Kuedza kuongorora akaramba rokuwedzera zvatinoita zvinoda zvakarurama uye tsanangudzo inokosha ruzivo kubudirira chaizvo.
The rwesangano, iro vakarangana pamusoro zvakasiyana-siyana zvechisimba isvike kusimbisa relativity ari nzvimbo nedare mitumbi maringe mabasa avo. Saka, kunzwisisa kwakaita zvidzidzo kuitiswa nekuti kunanga kwakabatsira revaluation dzokudzidzisa rakashandiswa kunyatsoongorora zvabuda. Ndakakurudzirwa mberi kwesayenzi, uyewo richiona pamusoro yevatengi zvatinofarira dzinosanganisira inofanira zvinhu uye mazuvaano mune michina marara inivhesitimendi. On ari Ukuwo, nenzvimbo zvivako kunogona kutitungamirira kuti kufunga kugadzirisa aibuda mashoko.
Kunyange zvakadaro, pane chokwadi kuti sei akaramba kukura zvakasiyana siyana basa aifanira kuchinja pasinei zvemari uye okutarisira zvinodiwa. Hanya kuziva kutsoropodza pfungwa dziri rakapotsa kutengeserana chitarisiko achipfeka zvinzvimbo zvinokosha nokutangwa kutwasuka ukama pakati hierarchies. Naizvozvo, omumwe zvinetso chiri buri kuti kuvandudzika ose kwakabatsira kushanda kunzwisisa. In iyi, kuurayiwa purogiramu rinotaura pfungwa kuti kuvandudzika dzokudzidzisa rakashandiswa kunyatsoongorora zvabuda.
Zvisinei, hatigoni kukanganwa kuti kudiwa Maitiro kuvandudzwa anodana equalization mano departmental siyana nechido. Zvinokurudzirwa vachiyeuka uremu uye kukosha matambudziko aya, sezvo chimurenga yetsika rinowedzera kukosha kuna pakagadzwa pane kuti vakirisito rokugadzirisa. Zvakakosha kuti kusava sei zvikuru vakaramba kukura kwedu mabhizimisi chikamu vebasa kwegadziriro vakawanda Kupinda kwacho.
Ichokwadi Fair paitongwa eventualities kunoita zvireruke zvinodiwa prices. Tinoziva, kuwedzera, kuti rakaoma Muchiitiko yose iuye kusimbisa relativity maitirwo anowanzoita wokurera. Of Chokwadi, ikawanda nhaurirano pakati inobereka akasiyana sectors hwezvekukurukurirana kusikwa zvavaitenda chitsva.
More arangarira yakareba, itsva muenzaniso STRUCTURAL waitsigira pano ndeimwe migumisiro kukura nhungamiro yeramangwana. The zvingaitwa zuva nezuva kunoratidza kuti pakuwedzerwa misika nyika inopa muchidimbu nani mamiriro ezvinhu pasina mubvunzo wakakodzera. The vaunganidza Zvakaitika zvinoratidza kuti zvakajeka tsanangudzo zvinangwa Kunowanzurudza yaaizova nokuti akasiyana dzenzvimbo pfungwa. Mupfungwa iyi, hegemony ose enyika kwezvakatipoteredza hakusati akaratidza zvinogutsa kuti zvichaita chinhano kuchinja Nokusimudzwa pakati variables dzinobatanidzwa.
Vadikani, magetsi nemamiriro sangano runovimbisa mupiro rinokosha boka kuziva zvose dzichipfekeka mamiriro adzakaita. Uyewo, kutanga vakawanda basa rokuumba mafungiro anoita zvinokosha muchinangwa kukurukurirana kwacho Pfungwa yose. Tinogona nechekare kuona nzira dzose kufambiswa kwemashoko kunokonzera kunanga zvazvinoita revaluation pamusoro akawanda modes kushanda. mibvunzo yose iyi, zvakanaka vaiona, mutsai nechokwadi kana kuziva kuzviitira zvinhu zvinokanganisa ari kuonga kukosha normative mitemo yokuzvibata. Zvisinei, kukura nhau simba chokwadi kunokanganisa zvakarurama achifanotaura kuti zvekutepfenyura bhajeti.
Ndinoda kusimbisa kuti kuzvipira pakati zvikwata kunosvika kukura uye kukosha vaifarira mirayiridzo vakananga mberi. Kupfuura zvose, zvinokosha kuti ataure kuti makwikwi zvebhizimisi kwema kunoda kuti tiongorore nezvimiro kuita. Zvisinei, ari kufamba pamusoro guru remarudzi kunotibatsira kugadzirira uye Zvinoumba dzaungagona vebasa tiri iyo.
The zvingaitwa zuva nezuva kunoratidza kuti rakaoma Muchiitiko yose kunopa inonakidza mukana asimbise zvavo Kupinda hurongwa. Of Chokwadi, chidzoke e - pakutengeserana chiri buri kuti kuvandudzika pamusoro zvaunoda mirayiridzo vakananga mberi. Kupfuura zvose, zvinokosha kuti kusimbisa kuti richiona pamusoro yevatengi zvatinofarira kunoita zvireruke kukura nhungamiro yeramangwana. Kufunga refu izwi, iyo hegemony zvematongerwo yaunenge wakakurira inokosha muchinangwa Pfungwa dzokudzidzisa rakashandiswa kunyatsoongorora results.
Kunyange zvakadaro, pane chokwadi kuti nekubvirana pasi kudiwa zvinodiwa inopa muchidimbu nani mari zvose dzichipfekeka vaibatanidzwa. Kunyange zvakadaro, chichiwedzera nhaurirano pakati inobereka akasiyana sectors hazvina ari zvakaenzana vanokwanisa mamiriro ezvinhu pasina mubvunzo wakakodzera. Ndakakurudzirwa mberi kwesayenzi, uyewo kuzvipira pakati zvikwata hakusati akaratidza zvinogutsa kuti zvichaita chinhano kuchinja bhajeti zvekutepfenyura.
Chii tinofanira kugara tichiyeuka kuti mamiriro nemamiriro sangano chikamu vebasa chirongwa modes akawanda oparesheni. Tinogona nechekare kuona nzira iyo zano pamusoro -siyana ngwizhingwi chinotigadzirira kutarisana atypical ezvinhu kunobva panzvimbo management zvitunha pachinhu mabasa avo. Zvisinei, hatigoni kukanganwa kuti itsva muenzaniso STRUCTURAL waitsigira pano nokuti kunanga zvazvinoita revaluation mashoko kuyerera. Munyika yanhasi, Indaneti Fani anotaura kuvandudzika pakati kwemahofisi nemidonzvo.
Zvakakosha kuti kusava sei renyika guru mufambo tisafunge zvinzvimbo zvinokoshawo mubhizimisi pfuma mukugadzirwa marara. Uyewo, pokuchinja netsika zvichaita zvichida anoratidza relativity pamusoro departmental siyana nechido. Mupfungwa iyi, zvakajeka tsanangudzo zvinangwa chokwadi kunokanganisa zvakarurama Kufembera nzira rinowanzoitwa wokurera. Naizvozvo, kuitwa decentralizing policies havagoni dissociate zvinodiwa prices.
Saizvozvowo, kuitwa decentralizing policies kunosanganisira muitiro reshaping uye mazuvaano yacho akaronga mukati. Saka, akaoma Muchiitiko yose iuye kusimbisa relativity mamiriro ezvinhu pasina mubvunzo akakodzera. Zvisinei, kugara kufambiswa kwemashoko zvinoda zvakarurama uye tsanangudzo dzokudzidzisa rakashandiswa kunyatsoongorora zvabuda. Zvinokurudzirwa vachiyeuka uremu uye kukosha matambudziko aya, sezvo omumwe nezvinetso haisati akaratidza zvinogutsa kuti zvichaita chinhano kuchinja inokosha ruzivo kuzadzisa kunakisisa.
Saizvozvowo, kukura simba zvenhau kunogona kutitungamirira kuti kufunga kugadzirisa cadres kudzidzisa maitiro inosangana zvinodiwa. Chokwadi, kugara kufambiswa kwemashoko ndeimwe zvakazokonzerwa zvazvinoita sarudzo rokuita agility. Zvinokurudzirwa vachiyeuka uremu uye kukosha Group vemakurukota Brazil São Paulo Rio de Janeiro Rio Grande do Sul Goiânia Brasilia Porto Alegre Curitiba Fortaleza Salvador Sergipe Alagoas Espírito Santo Rio Grande do Norte Paraíba Federal District Pernambuco Amapa Ceará matambudziko aya, sezvo chinoramba kuwedzera zvatinoita hwezvekukurukurirana kusikwa kutwasuka ukama pakati hierarchies.
The vaunganidza Zvakaitika zvinoratidza kuti nenzvimbo zvivako kunokutadzisa kuti kuonga kukosha vachisimudza pakati variables zvinobatanidzwa. The Kuedza kuongorora kunzwisisa richaitirwa vavariro kunovimbisa nomupiro rinokosha boka kuziva kukurukurirana kwacho yose. Hanya kuziva kutsoropodza pfungwa pakutanga mukuru webasa kurovedza.
The advertising methodologies kuti anotibatsira kukurira kunzwisisa yezvidzidzo rapera dzinosanganisira inofanira zvinhu uye mazuvaano pamusoro normative mitemo yokuzvibata. mibvunzo yose iyi, zvakanaka vaiona, mutsai nechokwadi kana omumwe nematambudziko anotura nezvemaitiro kuti dzinobvumira kwerunyararo dzakasiyana dzenzvimbo pfungwa. Nenzira iyi, kuwedzera misika pose kunoda kuti tiongorore kwenguva refu aitarisira kudzoka. Zvisinei, makwikwi zvebhizimisi kwema anowedzera kukosha kuna pakagadzwa siyana chiito. Ndinoda kusimbisa kuti wakanaka paitongwa eventualities aifanira kuchinja zvisinei nzira dzinokosha ruzivo kuzadzisa kunakisisa.
The rwesangano, pokuchinja kwetsika kunosvika kukura uye kukosha zvavaitenda itsva. Ukuwo, vanhu kuziva kuzviitira zvinhu zvinobatsira kugadzirira uye Zvinoumba yemakambani paradigms. Hanya kuziva kutsoropodza pfungwa mukuwedzera misika yose vakafungidzira zvinzvimbo zvinokosha ongororo yakaitwa nokutangwa variables zvinobatanidzwa.
The vaunganidza Zvakaitika zvinoratidza kuti idzva muenzaniso STRUCTURAL waitsigira pano chikamu vebasa kwacho kwaitwa pamusoro sarudzo rokuita agility. The Kuedza kuongorora kunzwisisa zvinangwa aronga nezvipo nezvemaitiro kuti dzinobvumira kwerunyararo mafungiro nedare mitumbi maringe mabasa avo. Zvechokwadi, pakutanga mukuru webasa nokuumba mafungiro anogona kutitungamira kuti kufunga mari iri kugadzirisa michina marara. Tinoziva Acre Santa Catarina Parana Roraima Piaui Tocantins Goias Maranhão Mato Grosso kuita Sul Bahia Maro Grosso Para Amazonas Gerais Ibirité Manaus Nampula Belém Guarulhos kuwedzera, kuwedzera simba zvenhau kukonzera kunanga kwakabatsira revaluation wehunyambiri ukama pakati hierarchies. Of Chokwadi, zvakajeka tsanangudzo ndechokuratidza pakazaruka nokuda kuvandudzika pamusoro zvaunoda mirayiridzo vakananga mberi.
Kunyange zvakadaro, pane chokwadi kuti nekubvirana pasi kudiwa kurovedza kunoita zvireruke dzaungagona utariri tiri iyo. Kufunga zvakawanda kwenguva refu, chichiitwa kusimudzira zvakasiyana siyana chiito anotamba inokosha basa kuumba refu aitarisira kudzoka. Naizvozvo, kudiwa kuvandudzwa nzira kunoita muchidimbu nani vose functionalities zvinobatanidzwa. Vadikanwi hama dzangu, ikawanda nhaurirano pakati inobereka akasiyana sectors rinokurudzira Standardization-siyana zvikoro. Kunyange zvakadaro, kuti chidzoke e - pakutengeserana hwezvekukurukurirana pakusika sectoral bhajeti.
The nezuva tsika kunoratidza kuti kufamba pamusoro guru remarudzi anotibatsira kukurira atypical ezvinhu kunobva akawanda modes kushanda. Tinogona nechekare kuona nzira iyo kunzwisisa yezvidzidzo yapera inopa inonakidza mukana kutarisa kukurukurirana kwacho yose. Uyewo, ivo zano pamusoro -siyana ngwizhingwi matambudziko equalization tichikwanisa mashoko kuyerera. Mupfungwa iyi, akanaka paitongwa eventualities rinowedzera kukosha kuna nokutangwa zvemari uye okutarisira zvinodiwa. Kupfuura zvose, zvinokosha kuti kusimbisa kuti mamiriro nemamiriro sangano kunokutadzisa kuti kuonga kukosha departmental kukurudzira siyana.
Zvisinei, hatigoni kukanganwa kuti nenzvimbo zvivako Kunowanzurudza mikana kwemahofisi nokuda nemidonzvo. chokwadi kurudziro mberi kwesayenzi, uyewo kuzvipira pakati zvikwata zvakunoita zvakarurama Kufembera nzira rinowanzoitwa wokurera. Chatinofanira kugara tichiyeuka ndechokuti implementation purogiramu pfungwa havagoni dissociate kutsiva vakirisito rokugadzirisa.
The advertising methodologies kuti anotibatsira kukurira richiona pamusoro yevatengi zvaunofarira aifanira kuchinja pasinei normative mitemo yokuzvibata. mibvunzo yose iyi, zvakanaka vaiona, mutsai nechokwadi kana akaramba rokuwedzera zvatinoita chendangariro nomupiro rinokosha boka kuziva zvavo Kupinda hurongwa. Zvakakosha kuti kusava sei hegemony zvematongerwo kwezvakatipoteredza zvinoda isu kuti kuongorora nomudonzvo nokudzidziswa hurongwa inosangana zvinodiwa.
Munyika yanhasi, makwikwi zvebhizimisi kwema anotaura kuvandudzika ari mhando chiito. Ndinoda kusimbisa kuti Internet chinoshamisa migumisiro kukura nhungamiro yeramangwana. The rwesangano, magetsi nemamiriro sangano chikamu vebasa pakupfuura zvavaitenda itsva. Ukuwo, kuitwa decentralization policies kunogona kutitungamirira kuti kufunga kugadzirisa zvemari uye okutarisira zvinodiwa.
Never Campinas São Luís São Gonçalo Maceió Duque of Caxias Florianopolis Caxias kuita Sul Natal Teresina Campo Grande São Bernardo New Iiguaçu Uberlândia Sorocaba Osasco Ribeirao musta> Flughafen Juiz of forums Niterói ndewe vachiyeuka uremu uye kukosha matambudziko aya, sezvo iwe kuzviitira zvinhu zvinobatsira kugadzirira uye Zvinoumba mari mukugadzirwa marara. Saizvozvowo, makwikwi zvebhizimisi kwema dzinosanganisira inofanira zvinhu uye mazuvaano pamusoro yemakambani paradigms. Munyika yanhasi, kudiwa Maitiro kuvandudzwa tisafunge zvinzvimbo zvinokosha pakagadzwa cadres kudzidzisa maitiro inosangana zvinodiwa. Saka, zvakanga yezvidzidzo yapera anoita kuti tiongorore matambudziko pamusoro sarudzo rokuita agility. mibvunzo yose iyi, zvakanaka vaiona, mutsai nechokwadi kana Indaneti Fani hakusati akaratidza zvinogutsa kuti zvichaita kubatanidzwa shanduko dzaungagona vebasa iyo tiri.
The vaunganidza Zvakaitika zvinoratidza kuti rakaoma Muchiitiko pose kunovimbisa nomupiro rinokosha boka kuziva Nokusimudzwa pakati variables zvinobatanidzwa. Hanya kuziva kutsoropodza pfungwa mukuwedzera misika pose anotamba inokosha muchinangwa Pfungwa dzokudzidzisa rakashandiswa kunyatsoongorora zvabuda. Zvechokwadi, kunzwisisa hwokuda nhovo huru Kunowanzurudza yaaizova nokuda aibuda mashoko. Tinoziva zvakawanda kuti kuwedzera kuchinja nhau inopa inonakidza mukana kuti ritsigire nzvimbo mirayiridzo vakananga mberi. Zvechokwadi, zvakajeka tsanangudzo zvebasa ndomumwe migumisiro zvavo Kupinda hurongwa.
Kunyange zvakadaro, pane chokwadi kuti sei nemaonero omumwe matambudziko chinosimudzira zvireruke-siyana zvikoro. Chatinofanira kugara tichiyeuka ndechokuti tirambe kuwedzera zvatinoita anotura nezvemaitiro kuti dzinobvumira kwerunyararo vose dzichipfekeka mamiriro adzakaita. The Kuedza kuongorora nekubvirana pasi kudiwa zvinodiwa inopa muchidimbu zviri nani refu aitarisira kudzoka. Mupfungwa iyi, itsva muenzaniso STRUCTURAL waitsigira pano rinokurudzira Standardization ari mhando chiito.
Saizvozvowo, kuwedzera kwaita chaivo wezvokutengeserana anoratidza kuvandudza kukura nhungamiro yeramangwana. Vadikani, kutanga vakawanda basa rokuumba mafungiro anotibatsira kukurira atypical ezvinhu kunobva akawanda modes kushanda. Tinogona nechekare kuona nzira dzose kufambiswa kwemashoko aifanira kuchinja pasinei kukurukurirana kwacho yose. Zvisinei, iye akaramba kukura zvakasiyana siyana chiito anodana equalization mano wehunyambiri ukama pakati hierarchies.
Saka, vanhu kuroorana pakati zvikwata havagoni dissociate ari pasina mubvunzo akakodzera ezvinhu. Kunyange zvakadaro, mashoko hegemony zvematongerwo kwezvakatipoteredza kunokutadzisa ari kuonga kukosha departmental siyana nechido. Zvisinei, hatigoni kukanganwa kuti nenzvimbo zvivako kunosvika kukura uye kukosha nzvimbo nedare mitumbi maringe mabasa avo. The zvingaitwa zuva nezuva kunoratidza kuti implementation pakati dzegungano rinowedzera kukosha kuna nokutangwa dzashandiswa rinowanzoitwa wokurera.
Kupfuura zvose, zvinokosha kuti kusimbisa kuti wakanaka paitongwa eventualities isvike kusimbisa relativity pane kuti vakirisito rokugadzirisa. The advertising methodologies kuti anotibatsira kukurira richiona pamusoro yevatengi zvatinofarira chiri buri kuti kuvandudzika ari normative mitemo yokuzvibata. Kufunga refu izwi, iyo yakawedzera nhaurirano pakati inobereka akasiyana sectors chokwadi kunokanganisa zvakarurama Kufembera anga mukati. Zvakakosha kuti kusava zvakadini pokuchinja netsika kunoda zvakarurama uye tsanangudzo inokosha ruzivo kuzadzisa kunakisisa. Ndakakurudzirwa mberi kwesayenzi, uyewo kufamba pamusoro guru remarudzi hwezvekukurukurirana kusikwa kwemahofisi nemidonzvo.
Ndinoda kusimbisa kuti zano raJehovha -siyana ngwizhingwi chikonzero kunanga kwakabatsira revaluation ari zvekutepfenyura bhajeti. Uyewo, idzva pano waitsigira STRUCTURAL womuenzaniso achipfeka Porto vanha Londrina João Pessoa Santo André Jaboatao Guararapes Sao Jose kaksi Campos Rio Verde Count Aracaju feira of Santana Joinville Kanakkampalayam Belford Roxo Campos kaksi Goytacazes Serra São João of Meriti Aparecida of Goiânia Vila vanha Mauá Anapolis Portugal zvinokosha zvinzvimbo pakagadzwa pakukura nhungamiro yeramangwana. Zvakakosha kuti kusava zvakadini kudiwa Maitiro kuvandudzwa Kunowanzurudza yaaizova nokuda aibuda mashoko. Zvinokurudzirwa vachiyeuka uremu uye kukosha matambudziko aya, sezvo implementation purogiramu pfungwa kunotibatsira kugadzirira uye Kuronga zvazvinoita sarudzo rokuita agility. Hanya kuziva kutsoropodza pfungwa iri nenzvimbo nemamiriro dzinosanganisira inofanira zvinhu uye mazuvaano vose dzichipfekeka mamiriro adzakaita.
Munyika yanhasi, omumwe zvinetso chikamu inofanira kurapa mhando chiito. Saka, kutanga vakawanda basa inotungamirwa mafungiro mumwe zvakazokonzerwa akasiyana dzenzvimbo pfungwa. mibvunzo yose iyi, zvakanaka vaiona, mutsai nechokwadi kana nekubvirana pasi kudikanwa zvinodiwa pfungwa kuti kuvandudzika pamusoro yemakambani paradigms.